न्यानो लिनोलियम: वर्णन, प्रकार, निर्माता र समीक्षा
अर्डर कोठा भित्र न्यानो तल्ला प्राप्त गर्न, जटिल र महंगा सामाग्री र ताप प्रणाली आवश्यक छैन खरिद गर्न। न्यानो कोटिंग्स को विविधता बीच थप आवंटित उपलब्ध हुन सक्छ। यस श्रेणीका एक विशेष ठाउँ अछूता लिनोलियम लिए।
किन अछूता कोटिंग चयन
उपभोक्ताहरु बीच लोकप्रियता र फर्श प्रदान प्रदर्शन, बिछाउने र सामान्य उपलब्धता को सजिलो बजार मा पहिलो स्थिति। नियम, यो प्रयोग तल्ला कवर को प्रकार , उच्च गुणवत्ता लागि आवश्यक छ जब छिटो र कम फर्श ढाक्नु महंगा हुन्छ। यो सामाग्री ठोस वा काठ को कुनै पनि सतह मा बिछाउने दिन्छ, तर यो आधार केही आवश्यकताहरू अनुरूप गर्न सिफारिस गरिएको छ।
न्यानो लिनोलियम दुई प्रकार, तिनीहरूलाई को एक न्यानो आधारमा उत्पादन र अन्य पृथक कवर रूपमा कन्फिगर गरिएको छ विभाजित। तिनीहरूलाई बीच त्यहाँ धेरै महत्वपूर्ण मतभेद, पात संरचना मा, तर पनि गुणस्तर को मामला मा मात्र छैनन्।
अछूता लिनोलियम को मुख्य प्रकार को विवरण: सामाग्री फोम
न्यानो लिनोलियम को फोम को आधार मा गर्न सकिन्छ। त्यहाँ कुनै अतिरिक्त लागत मा तल्ला ढाक्नु गर्न आवश्यक छ जब यो प्रयोग गरिन्छ। विशेष गरी अक्सर यस्तो कोटिंग आवश्यक भएमा ठोस आधार ढाकछोप गर्न लागू गरिएको छ, र वास्तवमा यो एकदम चिसो छ। यो एक लिनोलियम र काठ सतहहरु प्रयोग।
यी लिनोलियम को प्रकार जहाँ कुनै न कुनै सतह विभिन्न आदर्श evenness पूरै तिनीहरूको उन्मूलन लागि उचाइमा भएका परिवर्तनहरू र दरार, र समय छ छ प्रयोगको मामला मा जायज छ त, एक धेरै मोटाइ छ। न्यानो लिनोलियम फोम एक बरु जटिल संरचना छ। उदाहरणका लागि, topsheet - एक सजावटी सतह जो कुनै पनि रंग को हुन सक्छ। बिक्री हुनेछ जो एक विशेष ढाँचा र बनावट, यो पारंपरिक र अग्र embodiments हुन सक्छ यस्तै सामाग्री, पाउन सकिन्छ। आंकडा लामो समय को लागि आकर्षक उपस्थिति राख्छ कि पत्र को मोटाइ भर गठन।
अर्को तह, तल छ जो फोम रबर छ। यसलाई उत्कृष्ट ध्वनि अवशोषित र गुण इन्सुलेट छ। यो पत्र को मोटाई 1.5 देखि3मिमी, त्यसैले उच्च छैन। तथापि, यो प्रभावकारिता नै हामी चाहनुहुन्छ रूपमा छैन भनेर संकेत गर्दैन। केही अवस्थामा, अर्को तह फाइबर सिसा बनेको छ जो थपियो rigidity लागि थपिएको छ।
यस लागू घर्षण प्रतिरोधी पारदर्शी फिलिम, यांत्रिक क्षति लिनोलियम विरुद्ध सुरक्षा गर्न निमित्त जो माथि, अन्य कुराहरु, यो माटो भित्र संरचना प्रवेश देखि समाप्त। यो तल्ला मात्र व्यावहारिकता तर कायम राख्न पनि सजिलो, धुन गर्न सजिलो छ, र यसको शक्ति उचाईमा छ।
न्यानो लिनोलियम आधारित विवरण
तपाईं अछूता लिनोलियम रुचि हो भने, तपाईंले न्यानो आधारमा बनेको छ जो सामाग्री, ध्यान गर्नुपर्छ। यसलाई महसुस वा जूट को आधार मा उत्पादन प्रक्रियामा चिपके छ जो एक फिलिम छ। यस्तो कोटिंग मा हिंड्न नरम र लोचदार, सुखद छ। रूपमा समय-खपत कुनै न कुनै जमीन लागि आसंजन लागि आवश्यकता समावेश गर्दैन यो कोटिंग, एकदम सरल छ थुपार्नुहोस्। तर, माथिल्लो तह फरक प्रभावशाली शक्ति छ भन्ने तथ्यलाई मा व्यक्त गरिएका कमियां छन्। तसर्थ, भौतिक सजिलै क्षतिग्रस्त गर्न सकिन्छ, र सञ्चालन अवधिमा होसियार मनोवृत्ति आवश्यक छ।
त्यहाँ एक उच्च permeability छ ती स्थानहरू मा, कोटिंग राम्रो चाँडै अपील गुमाउन सक्छ। अन्य कुराहरु, पृथक आधारमा लिनोलियम उच्च आर्द्रता संग क्षेत्रमा, किनभने सब्सट्रेट को प्रभाव अन्तर्गत पानी बस संक्षिप्त सक्छ विशेष गरी प्राकृतिक सामाग्री आदर प्रयोग गर्न सकिँदैन। र यहाँ नर्सरी वा बेडरूम मा, यो कोटिंग उपयुक्त हुनेछ।
को चयन पृथक लिनोलियम समीक्षा
तपाईं पृथक आधारमा लिनोलियम किन्न निर्णय भने, उपभोक्ताहरु तल्ला कवर यस प्रकार सम्बन्धित कि सामान्य सिफारिसहरू पालन गर्न सिफारिस गरिएको हो। तसर्थ, कोठा को लागि, जो सर्तहरू उच्च आर्द्रता द्वारा विशेषता छन्, जूट वा महसुस आधार संग लिनोलियम मा काम गर्ने छैन। तर ती ठाउँमा जहाँ तल्ला सतह मा उच्चतम सम्भव लोड, यो राम्रो फोम आधारमा लिनोलियम महसुस गर्न हुनेछ।
एक फरक कोठा लागि सामाग्री छनौट, तपाईं संयुक्त पर्छ भनेर प्रतिमान र रंग ध्यान गर्नुपर्छ। उपभोक्ताहरु चौडाई जो यो कम जोइन्टहरूमा राख्नु गर्न अनुमति दिन्छ को कवर सामाग्री, सल्लाह गर्न रुचाउँदैनन्। खरिद गर्नु अघि यो स्थायित्व वर्ग उत्पादन को स्थायित्व निर्भर हुनेछ जो ध्यान महत्त्वपूर्ण छ।
को महसुस आधारमा लिनोलियम समीक्षा
लिनोलियम बाक्लो खुसीले गदगद यो महसुस आधारमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। को निर्माताहरु अनुसार, यो दुई पत्रहरू, घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने गैसकेट को गठन गरिएको छ तल जो हुन्छन्। माथिल्लो तह पोलीविनायल क्लोराइड फिलिम मा आधारित छ। भौतिक आधार राख्नु क्रममा मलबे र धूलो सफा गर्न सिफारिस गरिएको छ। कुनै न कुनै सतह टिकाउ र चिल्लो हुनुपर्छ।
विशेषज्ञहरूले सामाग्री को फाइबर को चिस्यान अवशोषण हटाउन महत्त्वपूर्ण छ भन्छन्। यो गर्न, यो कि चिस्यान को नींव 5% भन्दा बढी छैन सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो सतह मा राखे र2दिन को लागि बाँकी छ जो ग्लास, एउटा सानो टुक्रा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। ग्लास को भित्र सतह मा यो समय पछि तपाईं चिस्यान को निशान नोटिस भने, आधार एक गर्दा पछि यस्तो लिनोलियम बस Rot सुरु हुन सक्छ देखि, महसुस को नींव बिछाउने लागि उपयुक्त छ। तपाईं ठीक सतह सुक्खामा भने, त्यसपछि भविष्यमा यो लागत थप कारण हुनेछ। यस मामला मा मोल्ड फैलाउने रोक्न विशेष समाधान को सतह प्रशोधन गर्न आवश्यक छ।
विभिन्न निर्माताहरु लिनोलियम: सामाग्री ब्रान्ड Tarkett
तपाईं वर्णन सामाग्री रुचि राख्नुहुन्छ भने, यो भन्दा बढी 120 वर्ष बनेको छ जो पृथक लिनोलियम "Tarkett", ध्यान गर्न सम्भव छ। यो समयमा कम्पनी फर्श लागि टिकाउ र सुरक्षित समाधान को एक निर्माता रूपमा नै स्थापित छ। आज, Tarkett यो शीर्षक यो एनालग फर्श निर्माताहरु बीचमा खडा बनाउँछ, रूस मा नम्बर एक ब्रान्ड हो। जसको मूल्य 196 rubles देखि सुरु यो लिनोलियम खुसीले गदगद। प्रति वर्ग मीटर, उचित स्थापना संग 10 भन्दा बढी वर्ष सेवा गर्न तयार छ। यो KM5 आगो सुरक्षा को एक वर्ग पर्छ।
लिनोलियम कम्पनी "Komitex लिन पर्मा"
तल्ला लिनोलियम जो 181 rubles उत्पादनहरू प्रदान निर्माता "Komitex लिन पर्मा", देखि सामाग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ढाक्नु। प्रति वर्ग मीटर। यो सामाग्री एक सुरक्षा तह जसको मोटाइ 0.15 मिमी छ। कवरेज flammability T4 को कक्षा बुझाउँछ।
एक सुरक्षा तह प्रयोग फाइबर सिसा र 35g / m2बराबर abradability रूपमा। परीक्षण अनुसार, रैखिक आयाम परिवर्तनको 0.2% पुग्न सक्छ। निर्माता भनेर बाहिर पोइन्ट को सेवा जीवन सामाग्री 20 वर्ष पुरानो छ। यो अछूता लिनोलियम जसको मूल्य औसत उपभोक्ता को लागि स्वीकार्य छ, पानी प्रतिरोध गुणस्तर छ र underfloor लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
को लिनोलियम अन्तर्गत इन्सुलेशन बिछाउने
एकदम अक्सर अप्रेंटिस आश्चर्य कसरी न्यानो तल्ला को लिनोलियम अन्तर्गत। ठोस कोटिंग एक पनरोक फिलिम, सरल पलीथीन यो उद्देश्य लागि उपयुक्त राख्नु पर्छ लागि चिस्यान अवशोषण सामाग्री रोक्न क्रममा। फिल्म माथि राखे छ लिनोलियम, र जंक्शन टेप निर्माण चिपके। तपाईं त गर्मी इन्सुलेट रंग लागू गर्न पूर्व-आवश्यकता को आधारमा थप ठोस सतह ढाक्नु गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो तरल इन्सुलेशन गर्नेछ। यसको आवेदन पछि पूर्ण सुकाउने लागि प्रतीक्षा र यो लिनोलियम फैलाउनु हुनेछ जो प्लाईवुड, माथि राख्नु पर्छ।
फर्श को प्रभावकारी थर्मल इन्सुलेशन लागि, तपाईं लिनोलियम माथिको प्रकार को एक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो कोटिंग सतह र व्यावहारिकता को उच्च सौंदर्य गुण हासिल गर्न अनुमति दिन्छ।
जीवित अवस्था कसरी सुधार गर्न: लेआउट brezhnevok परिवर्तन?
बाल सदन मा छुट्टी। कसरी आफ्नै हातले नयाँ वर्ष को एक समूह सजाने?
झण्डा, गान र Khakassia को काखमा को कोट। गणतन्त्र को काखमा को कोट को विवरण र मूल्य
नयाँ Accommodation लातविया Accommodation विहार अब्खाजिया उल्लेखनीय स्थान
Pyelonephritis संग आहार: विरामीहरु को खाने बानी
"Herbalife" उत्पादनहरू: सिद्ध हानि!